Cambaarayn: Muwaaddin Hal Sanno Maxkamad La’aan CIDda Hargeysa Ugu Xidhan Ganacsade | SDWO.COM & SomalilandNews.net
Cambaarayn: Muwaaddin Hal Sanno Maxkamad La’aan CIDda Hargeysa Ugu Xidhan Ganacsade
Published on November 25, 2016 by sdwo · No Comments
Caalin Cashuur Cawad waa nin qaba toddoba xanuun oo kala ah macaan, dhiig-kar, subagowga dhiigga iyo qaar kale. Maxkamadda waxa la geeyay hal maalin oo keliya, waxaanu xidhan yahay muddo sannad ah. 1dii Disember 2015ka ayaa la taxaabay.
Si baadhitaan loogu sameeyo xaaladdiisa caafimaad waxa loo gudbiyay Cusbitaalka Guud ee Magaalada Hargeysa, waxaana in uu nin sidan bukaan u ahi xidhan yahay la yaabay Agaasimaha Guud ee Cusbitaalka Hargeysa. “Haddii aan xanuunnnadaada dadka u sheego, waa la yaabayaa. Xitaa haddii Boolisku amro in aan ku baadho, ma yeelayo. Waa in Maxkamaddu soo amarto in aan ku baadho” ayaa uu yidhi Agaasimaha Cusbitaalku. Waxa uu amray Agaasimuhu in toddobaadkiiba hal mar la keeno cusbitaalka, bishii kowaad ee uu xidhnaa waa la fuliyay taladan. Intii dambena waa la iska dhego-tiray
Tan iyo sannadkii 2002da ayuu shaqaale u ahaa Shirkadda Al-xarbi, isaga oo u adeegayay muddo dhan 13 sanno. Caalin Cashuur Cawad waxa ku maqan lacag dhan $100,000 (Boqol kun oo doollar) oo isugu jira wax qof ahaan loogu leeyahay iyo qayb dadka uu amaahiyay. Waxa la doonayaa in uu marag ku furo Mukhtaar Xuseen Cali, waxaanay shirkaddu sheegtay in ay lacagtaas ka hayso Caalin. “Maadaama oo ay xisaabtii Alle dambayso waa aan diiday in ay lacagtaasi cid kale ku maqan tahay” ayuu yidhi Caalin.
Shirkadda Al-xarbi waa ay diidday in ay la wareegto $70,0000 (Toddobaatan Kun oo Doollar) oo ay eheladiisu ku hayaan dhul iyo naqad. Xal kasta iyo waanwaan kasta oo lagaga ergeyaayay in dammaanad iyo heshiis lagu sii daayo intaba waa la diiday. Xigaalkiisu waxa ay hadal ku jareen “Ina Xarbow waa inoo maalinta uu Caalin Cashuur xabsiga ku geeriyoodo”. Xilli la isku deyay in dammaanad lagu sii daayo Caalin Cashuur waxa diiday Maxkamadda Gobolka Hargeysa ku andacootay in uu amar uga yimi madaxtooyada
Waxa aanu cambaarayn xooggan u jeedinaynnaa Shirkadda Alxarbi ee jeelasha Somaliland ka dhigtay Guwaantannaamadii labaad, waxa aanu ugu baaqaynnaa in ay xorriyadooda u soo celiyaan Caalin Cashuur Cawad iyo Mukhtaar Sheekh Xuseen Cali